Mobile Legends Twilight Pass (Myanmar) - Codashop
ထုတ်ကုန်များ ⇒ Diamond တွေကို ဒီမှာ ဖြည့်လိုက်ပါ
Mobile Legends: Bang Bang Twilight Pass ကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းTop upလိုက်ပါ! သင်၏ Mobile Legends: Bang Bang user ID ဖြည့်ပါ၊ သင်ဝယ်လိုသော Twilight Pass ပမာဏကို ရွေးချယ်ပါ၊ ငွေပေးချေမှုကို ဆောင်ရွက်ပါ၊ ထို့နောက် သင်၏ MLBB အကေငာင့်တွင်း ဝယ်ယူထားသည့် Twilight Pass ချက်ချင်း ဝင်ရောက်လာမည် ဖြစ်သည်။
မိမိ စိတ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ငွေချေစနစ် MPT , Telenor, Ooredoo, easyPoints, WavePay.တွေနဲ့ ပေးချေလိုက်ပါ။ Credit ကတ် ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် Login ဝင်ရခြင်း စသဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်မလိုပါ!
ခုပဲ Mobile Legends: Bang Bang ကို ‌ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးတော့ ကစားလိုက်ပါ။
ခရက်ဒစ်ကဒ်မလိုဘဲ အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် Twilight Pass အဖွဲ့ဝင် အဆင့်သို့ မြှင့်တင်ပါ
Mobile Legends: Bang Bang အတွက် Twilight Pass ကို ဝယ်ယူဖိို့ စက္ကန့်ပိုင်းသာ လိုအပ်ပါသည်။ Codashopကို အသုံးပြုပြီး လျင်မြန်လွယ်ကူဆုံံးနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ Codashop ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ မီလီယံနဲ့ချီတဲ့ ဂိမ်းကစားသူတွေဆီကနေ ယုံကြည်မှုအပြည့်အ၀ ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Codashop ကနေ စိန်တွေဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ခရက်ဒစ်ကဒ် အသုံးပြုစရာမလို ၊ Login ဝင်စရာမလိုတာကြောင့် အဆင်ပြေစေပါတယ်။.စတင်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
အကူညီလိုနေလား? ဤနေရာသို့သွားပါ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ
Mobile Legends: Bang Bang အကြောင်း-